Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Jukr Boon-Long as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Republic of the Union of Myanmar – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Jukr Boon-Long as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Republic of the Union of Myanmar.
Mr. Jukr Boon-Long was born on 17th November 1957 in Thailand. He obtainedaBachelor’s degree of Law from the University of Ramkhamhaeng of Thailand,aMaster’s degree in International Politics and Economics from the University of Detroit, United State of America, and an honourable degree from the National Defense College of Thailand in 2009.
He joined the Ministry of Foreign Affairs of Thailand in 1984, and has served in various capacities in the Ministry and the Royal Thai Embassies in Washington DC, Hanoi and Berlin. From 2006 to 2009, he served as Consul-General of Thailand in Los Angeles, United State of America. From 2009 to 2012, he served as Director General of the Department of Consular Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. From 2012 to 2015, he served as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Thailand to the State of Israel. Currently, he is serving as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Thailand to the Kingdom of Norway.
Mr. Jukr Boon-Long is married.
Dated: 26th September 2016
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စတာ ဂျတ်ခ်ဘွန်လုံ အား ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်။
မစ္စတာ ဂျတ်ခ်ဘွန်လုံ ကို ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ရမ်ခမ်ဟေအင်း တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဒက်ထရွိုက်တက္ကသိုလ်မှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်မှ ဂုဏ်ထူး ဆောင်ဘွဲ့ကို လည်းကောင်း ရရှိခဲ့သည်။
၎င်းသည် ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ဝါရှင်တန်မြို့၊ ဟနွိုင်းမြို့၊ ဘာလင်မြို့တို့ရှိ ထိုင်းသံရုံးများ၌ ရာထူး အဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ် မြို့၌ ထိုင်းကောင်စစ်ဝန်ချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကောင်စစ်ရေးရာဦးစီးဌာနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းသံအမတ်ကြီး အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန် များထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် နော်ဝေနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းသံအမတ်ကြီး အဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
မစ္စတာ ဂျတ်ခ်ဘွန်လုံ သည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်